Safka hoose ee xayeysiiska Adidas ee xariifka ah | Abuurista khadka tooska ah
Maxaa lagu gaari karaa kaliya xariijinta xariiqda astaanta mararka qaarkood waa wax laga naxo. Tani waa waxa ku dhacaya fikradda weyn ee lagu fuliyay fikraddan xayeysiinta Adidas.
Waa kan Adidas sandals xayaysiinta, Mid ka mid ah bisadu ay u qaadatay biyaha iyadoo haysata fikraddan xayeysiinta weyn, taas oo xariijin jiif ah si fudud loogu sawiray si ay si fiican ugu haboonaato astaanta astaanta kabaha isboortiga.
Habkaas hal abuurka ah ee sii calaamadda Adidas qallooc iyo inay ugu dambayntii ku habboon tahay inay astaan ​​u noqoto astaanta, waxay u adeegtaa si dhammaystiran si ay u fuliso wax ka beddelka sida kan la fuliyay, iyo kuwa soo jiidashada leh.
Saddexdaas sadarro ee hal-ku-dhegga ah ayaa jiray kudar xariiq taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad si qumman u sawirto fikradda sandal Adidas ah. Waa wax qabow oo aad u fudud in ay tahay xariifnimo saafi ah. Markaa waxay sidoo kale na baraysaa in fikraddan xariifnimada ahi ay hareeraha ka xigi karto in yar oo dulqaad leh oo ay u oggolaato "in ay kariso" maskaxdeenna iyo hal-abuurkeenna.
Ama qalad fudud oo shalash ama istaroog ah ayaa kuu horseedi kara sii fikradahan waaweyn. Ayaa oran lahaa qaladaadka ma aysan marin wadadooda. In kastoo qaarna ay u sacaba tumeen xariiqda jiifka ah, qaar kalena waxay xuseen inay iyaduna noqon karto doon, inkasta oo ay weli wax badan fahamsan tahay inay ka sii badan tahay hinaasaha.
Un Astaanta Adidas ee keentay astaanta sneaker-ka yeelan karaan dhacdooyin asal ah adoo si fudud u sawiraya xariijin jiif ah oo ka hooseysa saddexdaas xarriiq. Waxaan ka wada hadalnay fikraddaas sanado ka hor oo ka mid ah saddexda xarigood taasna wax badan ayey ka siisay sumaddan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Xayeysiintan fikradda ah ee Adidas waa mid heer sare ah
Bayardo Rueda Mayorga booskiisa hage dijo
Wanaagsan, fudud waa qurux badan yahay !!!
Jawaab Bayardo Rueda Mayorga
Markaad cinwaan uga dhigto Jardiinooyinka Qaranka ee Mareykanka oo leh 1-xiddig oo dib u eegis ah